FJKM Ankadindramamy Fahazavana » Rakotondrasoa Harijaona Andriatsarafara
Rakotondrasoa Harijaona Andriatsarafara
Misaotra an’Andriamanitra isika fa vita soa amantsara ny fandrafetana izao « site web » ny fiangonana izao. Fitaovana iray omen’Andriamanitra antsika zanaky ny FJKM Ankadindramamy Fahazavana : ahafantatra bebe kokoa ny fiainana sy ny fitaizana ataon’ny Fiangonana sy ny Sampana ary ny Fikambanana eto amintsika.
Misaora an’i Jehovah, ry fanahiko; Ary izay rehetra ato anatiko, misaora ny anarany masina.Misaora an’i Jehovah, ry fanahiko; Ary aza misy hadinoinao ny fitahiany rehetra, Izay mamela ny helokao rehetra, Izay manasitrana ny aretinao rehetra,Izay manavotra ny ainao tsy hidina any an-davaka, Izay manarona famindram-po sy fiantrana anao, Izay mahavoky soa ny vavanao; Ny fahatanoranao mody indray toy ny an’ny voromahery
( Salamo.103 / 1 – 5 )
Mirary soa ary mampahery antsika rehetra.